ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ပနားမားရှိ LLC
သင်ပနားမားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Million Makers Panama သည် Panama နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက် Clients များကိုအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်နေရာများနှင့်ပနားမားမှလွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
သင်၏ပနားမားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
ပနားမားအတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ ပနားမားအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ပနားမားအတွက် Virtual နံပါတ်၊ ပနားမားအတွက် CRM Solutions၊ ပနားမားအတွက် virtual office၊ ပနားမားအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ပနားမားသည်ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောကန့်သတ်နယ်မြေဖြစ်သောပနားမားကျွန်းဆွယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်းဆွယ်ကိုဖမ်းယူပြီးအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိကျွန်းပေါင်း ၁၆၀၀ ကျော်ကို ကျော်လွန်၍ အပူပိုင်းဒေသသည်ပနားမားတူးမြောင်း၏နေရာအဖြစ်ကျော်ကြားသည်။ သစ်ပင်များနှင့်သစ်ပင်မျိုးစိတ်များအပါအ ၀ င်၎င်း၏ပုံမှန်ခမ်းနားထည်ဝါမှု၊ မတူကွဲပြားသောအပင်နှင့်သတ္တဝါများဘဝနှင့်၎င်း၏တေးဂီတနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့အတွက်အလားတူပင်ထင်ရှားသည်။ နိုင်ငံ၏ချက်ပြုတ်မှု၊ လက်မှုလက်ရာ၊ ဂီတနှင့်အရေးအသားတို့တွင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများသည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောလူမှုရေးသက်ရောက်မှုများပေါင်းစည်းခြင်းကိုပနားမားမှတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ ၎င်း၏မြို့တော်ပနားမားသည်ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်း၏အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ မြင့်မားသောမြင့်မားသောမြင့်မားသောမြို့တစ်မြို့သည်အဖြူရောင်ဖြူထားသောအ ၀ တ်များဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောထိုမြို့သည်ဒေသအတွက်စီးပွားရေးနှင့်ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအုပ်ချုပ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအရေးပါမှုကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်း၏ဘဏ္advာရေးတိုးတက်မှုသည်ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာပြandနာများနှင့်နိုင်ငံရေးပstrိပက္ခများကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေသည်။
B&B၊ တည်းခိုခန်းများနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများကဲ့သို့တိုးတက်မှုများမှသည်ကန်ထရိုက်ကျဆင်းသည့်အလုပ်များသို့မဟုတ်လေ့လာရေးခရီးများကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအထိပနားမား၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်စိတ် ၀ င်စားရန်အကန့်အသတ်မဲ့ရွေးချယ်မှုများရှိသည်။
ပနားမားသည်ယခုအခါ၎င်း၏ပိုင်နက်နယ်မြေပြန်လည်သစ်တောပြုန်းတီးမှုအပေါ်များစွာအာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။ ဤဒေသသို့အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသောစျေးကစားသူများအားဆွဲဆောင်ရန်အတွက်အစိုးရသည်သစ်တောပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောမြေများကို ၀ ယ်ယူသောသို့မဟုတ်ပြန်လည်သစ်တောပြန်လည်တင်ပို့ရန်အတွက်ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ငွေကြေးနှင့်ရိန်းဂျား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်သည်။ ဥပမာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀,၀၀၀ ဖြင့်သင်လှူဒါန်းနိုင်သည့်အခွင့်အရေးတွင်ပနားမားတွင်နေထိုင်ခွင့်ရရှိရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပြန်လည်သစ်တောနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာဖြေရှင်းချက်ကိုသင်ရနိုင်သည်။
ပနားမားနိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၏ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေမှအခြားဗဟိုအမေရိကရှိနိုင်ငံများထက်လျင်မြန်စွာပြန်လည်သက်သာလာခဲ့သည်။ မြေယာပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဒေသတွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့အနားယူအငြိမ်းစားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပျော့အပူနှင့်စိုထိုင်းဆမှဖော်ပြချက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပနားမားသည်အငြိမ်းစားယူခြင်းအားဖြင့်အခွန်ကင်းလွတ်သောမိသားစုယူနစ်များနှင့်တည်းခိုခန်းများ၊ ကဖေးများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်အခြားကျွမ်းကျင်သူဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုကန့်သတ်ထားသည်။
ပနားမားတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ အထိတန်ဖိုးထားသောပုဂ္ဂလိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများအပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသည်။ ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀၀ အထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၁၀ နှစ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီး၊ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ အထက်ရှိသောအရာအားလုံးသည်ငါးနှစ်ဖြစ်သည်။
ပနားမားမှဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကိုပြုလုပ်သည်။ ပနားမားပစိဖိတ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းအတွက်တိုးတက်မှု၊ တိုးတက်မှု၊ တိုးတက်မှု၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပနားမားပစိဖိတ်ခရိုင်တွင်ခန့်အပ်ထားသည့်နယ်မြေများအားတရားဝင်အသုံးချမှုအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ။ အားကိုးရသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်သည်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းဇုန်အတွင်းသတ်မှတ်ထားသည့်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အလုပ်နှင့်တရားဝင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုစွန့်လွှတ်သည်။ ဤရွေ့ကားပြင်းထန်သောကြောင့်နယ်မြေအတွင်းဒေသခံအခြေစိုက်စခန်းတည်ထောင်ရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမိတ်ဖက်များအတွက်ဆွဲဆောင်စေ။ 3M, DELL, BASF နှင့် Caterpillar အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပနားမားပစိဖိတ်ဒေသတွင်တည်ရှိသည်။
ပနားမားတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း - စီးပွားရေးဖွင့်ပါ
ပနားမားသည် ၄ ​​င်းတို့၏စီးပွားရေးအားသာချက်များနှင့်ဒေသဆိုင်ရာဗဟိုအမိန့်ကိုရွှေ့ပြောင်းရန်ကြိုးစားနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်၏ဒေသအဆင့်သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည်။ စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်တို့ပြောဆိုသောကုန်ထုတ်လုပ်သားအင်အားနှင့်ခိုင်မာသော၊ ရိုးရှင်းသောတာဝန်မူဘောင်အားလုံးသည်ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောရင်းမြစ်များနှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုလစာ၊ ထိန်းသိမ်းထားမှု၊ ပနားမားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါစပိန်ဘာသာစကားကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်တန်ဖိုးရှိသော်လည်းမလိုအပ်ပါ။ စိတ်အားထက်သန်စွာအကြံပြုသည်မှာအများပြည်သူနှင့်အနီးအနားရှိအစိုးရများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်မှန်ကန်သောသံသရာကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ကြောင်းအာမခံရန်သင့်လျော်သောစီးပွားရေးရှေ့နေကိုခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
Panama သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ထူးခြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေနပ်မှုကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်း၏အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုနှင့်အတူပနားမားသည်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများထက် ပို၍ ပေါ့ပါးပြီးသိသိသာသာတန်ဖိုးထားသည်။ ပနားမားသည်အခြားအိမ်နီးချင်းဒေသများမှအလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသောအသားတင်အုပ်စုများအားခိုလှုံရာနေရာတစ်ခုပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဗင်နီဇွဲလားနှင့်ကိုလံဘီယာသည်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ပုဂ္ဂလိကဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေနိုင်ငံသည်သင်၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များလုံခြုံမှုရှိပြီးကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးလက်တွေ့ကျကျထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ခမ်းနားသောကျောင်းပညာရေးမူဘောင်ကိုရရှိသည်။
ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ပနားမား၊ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ပနားမားသို့စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပနားမားတွင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ တို့၌တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
ပနားမားရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ပနားမားရှိ virtual ရုံးဖြစ်သောသင်၏တာ ၀ န်နေရာများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ ပနားမားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ပနားမားရှိ virtual နံပါတ်၊ ပနားမားရှိစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ ပနားမားရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပနားမားရှိဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပနားမားရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှု၊ ပနားမားရှိ CRM Solutions၊ ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ပနားမားသို့မဟုတ်ငွေပေးချေရန်တံခါးပေါက်ပနားမား၊ ကြောင့်ပနားမားတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပနားမားရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပနားမားရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပနားမားရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ပနားမားရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပနားမားရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောနည်းပရိယာယ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း၊
ပနားမားတွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - ပနားမားနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပနားမားမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်သည့်ဝန်ထမ်းများကိုပနားမားတွင်ငှားရန်သို့မဟုတ်ပနားမားတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်းရန်ကူညီသည်။ ပနားမားရှိစီးပွားရေးရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၊ ပနားမားရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားရှိ virtual နံပါတ်များ၊ ပနားမားတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ပနားမားရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပနားမားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပနားမားရှိဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပနားမားရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway ပနားမားတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပနားမားတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ ပနားမားတွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလိုက်နာခြင်း၊ ပနားမားရှိအိုင်တီနည်းပညာ၊ ပနားမားရှိဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပနားမားရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပနားမားရှိအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်ပနားမားရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
"Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာပနားမားနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ စီးပွားရေးအကျယ်အ ၀ န်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE သည်ပနားမားအတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ပနားမား (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ပနားမား (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ပနားမား
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ပနားမား
Merchant Account Panama / Payment Gateway ပနားမား
ပနားမားကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ပနားမားကုမ္ပဏီ Chop and Seal
●နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္မဏီပနားမား (၁ နှစ်) အတွက် ၀ န်ဆောင်ခ - ဒေါ်လာ ၉၀၀
●ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခွင့်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်ခဒေါ်လာ - ၈၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●ပနားမားရှိ Resident Non-Company အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်
●ပနားမားမှာနေထိုင်သူမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်စံသတ်မှတ်ထားသည့်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းပနားမားရှိစာချွန်လွှာနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။
ပနားမားတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင်ပနားမားသို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီပနားမားအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Non-Resident Company အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Millers Makers မှတဆင့်ပနားမား၌တည်၏
သင်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပနားမားကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များမည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ ပနားမားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ပနားမားရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပနားမားတွင်ဖောက်သည်များနှင့်ပနားမားအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်ပနားမားမှကုမ္ပဏီများအတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီမည်။ ပနားမား။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုပနားမားတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ပနားမားအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်နှင့်သင်၏မိသားစုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်မှုများပါဝင်သည်။ အဘို့ ပနားမားနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ပနားမားရှိလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့အကြံဥာဏ်” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ပနားမား ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ပနားမား.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုမြင့်မားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်သင်ပနားမားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းများနှင့်အတူသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ပနားမားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုပနားမားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှပင်ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးသတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ပနားမားရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
WE သည်ပနားမားအတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ပနားမားရှိ Panama / LLC တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်
ပနားမားတွင်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ပနားမားရှိပနားမား / LLC ရှိနေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီအစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
ပနားမား / LLC ရှိနေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီအတွက်လက်မှတ်မူကြမ်းတွင်ပနားမားစာအုပ်။
ပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ပနားမား / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ၊ ပနားမားရှိ Panama / LLC တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်ပါက၊ ပနားမားရှိ Panama / LLC တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီ။
ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပနားမား / LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ပနားမားရှိ Panama / LLC တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီ:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျပနားမားအတွက်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကခွင့်ပြုပေးပနားမားအတွက်ခွင့်ပြုချက်ကိုပြုလျှင်, Million Makers မှာငါတို့လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပနားမားအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ပနားမားတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ပနားမားရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ပနားမားရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္Panာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်ပနားမားရှိအခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။ ပနားမားတွင်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပနားမားရှိလုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုများ။
သင်ပနားမားရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ရယူရန်မည်သည့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ပနားမားနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်နယ် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများပနားမားသို့သာမကနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပနားမားရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများဖြင့်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပနားမားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။
ပနားမားရှိ Corporate Services | ပနားမားစီးတီးရှိ Corporate Services
ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပနားမားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပနားမားရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပနားမားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပနားမားရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပနားမားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပနားမားရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပနားမားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပနားမားရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပနားမားရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
ပနားမားရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | ပနားမားမြို့ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ
ပနားမားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ပနားမား.
ပနားမားရှိ Accounts Outsourcing
သင့်ကုမ္ပဏီကိုသင်ပနားမားတွင်အပ်နှင်းထားပြီးသင် outsource လုပ်နိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ပနားမား။
HR အတိုင်ပင်ခံ ပနားမားတွင်ပေးအပ်သည်မှာသင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပနားမားတွင် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ပနားမားရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ပနားမားနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံ၊အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းပနားမား၌တည်၏
ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ပနားမား.
ပနားမားရှိ cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်ပနားမားမှ။
ပနားမားရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ သင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပနားမားတွင်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်၊ ပနားမားရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ။
Virtual Number - ပနားမားအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ပနားမားရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်ပနားမားရှိ VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။ ပနားမားရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံရှိပနားမားမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ပနားမား ပနားမားတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ပနားမားရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပနားမားပနားမားရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပနားမားရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုပနားမားတွင်တည်ဆောက်သည် စျေးနှုန်းချိုသာသောကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပနားမား
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ပနားမားတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ပနားမားတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပါ ၀ င်သောသီးခြားဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသူများ။ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောအရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်သူတို့၏ကုမ္ပဏီ၏ပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းထားသောပနားမားရှိနေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်နေထိုင်သောကုမ္ပဏီမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်မဟုတ်သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပနားမားတွင်ကမ်းလွန်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီ၊ ပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားတွင်နေထိုင်သူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်တွင်နေထိုင်သူကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်တွင်နေထိုင်သူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ပံ့သည် ပနားမားတွင် LLC မှတ်ပုံတင် ပနားမားတွင် IBC ပါဝင်မှု | ပနားမားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ပနားမားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ပနားမားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ပနားမားတွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ပနားမားတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားပနားမားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားတွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Panama LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ပနားမား LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ပနားမား LLC မှတ်ပုံတင်, ပနားမားကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ပနားမားကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိနေထိုင်သူများနှင့်ပနားမားရှိ IBC ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပါ ၀ င်သည့်ပနားမားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ပနားမား IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ပနားမား IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ပနားမား IBC မှတ်ပုံတင်, ပနားမားကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ပနားမားကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ပနားမားတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုပနားမားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပနားမားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမား LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ပနားမားရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများအားပနားမားရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပနားမား IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမား IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမား IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ပနားမားရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၊ ပနားမားတွင်စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပနားမားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ပနားမားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပနားမားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမား၊ ကမ်းလွန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများပနားမားတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူမှတ်ပုံတင်ပါ ပနားမားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ရန် IBC ကိုပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ပနားမားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ Iama ကုမ္ပဏီကိုပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ပနားမားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရန် ပနားမားတွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့သည်။ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ပနားမားမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပနားမားမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည် ပနားမားရှိကုမ္ပဏီများသည်ပနားမားမြို့၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားမြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားမြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားမြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားမြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ပနားမားတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Panama City တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိသည် ပနားမား၊ Panama City ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပနားမားမြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပနားမားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ ပနားမားမြို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ပနားမားမြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ပနားမားမြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ပနားမားမြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်ရန်၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်မြို့ကြီးများ Panama City တွင် Panama City တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။ Panama City တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ။ Panama City တွင် Setup ကုမ္ပဏီ၊ Panama City တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။
ပနားမားတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ပနားမားမြို့တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားတွင်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားအားပနားမားတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပနားမားမြို့ရှိနေထိုင်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအဝင်ပနားမားတွင်ပါဝင်သည်။ , Panama City တွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက် Panama City တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Panama | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပနားမား
ပနားမားတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) ပနားမားတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့တည်ထောင်မည်နည်း။
သင်ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ပနားမားတွင် LLC မှတ်ပုံတင် ပနားမားရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပနားမားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပနားမားရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပနားမားတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုပနားမားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ပနားမားတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီ ပနားမားတွင် LLC IBC ကိုပနားမားတွင်ထည့်သွင်းပါ ပနားမားရှိ LLC ကုမ္ပဏီ ပနားမားရှိ IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ ပနားမားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ ပနားမားရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းပါ
အသုံးပြုသူအများစုကမေးသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အကြားခြားနားချက်မရှိပါက၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
ပနားမားရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ ပနားမားရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ပနားမားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
သင်၏ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပနားမားတွင်ဖြစ်စေ၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်သုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြောက်အများနှင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်လူသိများသောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုပေးသည်။ သင်ပနားမားတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်ပနားမားနှင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကြံပေးများ။
ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ပနားမားရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီးပနားမားမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
သင်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ပနားမားရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ သို့မဟုတ်ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ ပနားမားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပါ။ အလားတူပနားမားတွင်လည်း Panama City တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်၊ ပနားမားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) ပနားမားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ် Panama City တွင်တည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းရန် (သို့မဟုတ်) ပနားမားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (ပနားမား) တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် စီးတီး, ပနားမားစီးတီးအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
ပနားမားတွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Panama City တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Presidencia de la República de Panamáသမ္မတပနားမားသမ္မတနိုင်ငံ (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ။
Asamblea Legislativa de Panamáပနားမား၏ဥပဒေပြုလွှတ်တော် (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြင်ပဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာန (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ။သံတမန်ရေးရာမစ်ရှင်
Embajada de Panamáပီရူးနိုင်ငံရှိပနားမားသံရုံး (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ။
ပြည်ပရှိပနားမားသံတမန်များပြည်ပရှိပနားမားသံတမန်ရေးရာစာရင်း၏လိပ်စာစာရင်း။စီးပွားရေး & စီးပွားရေး
Bolsa က de Valores က de ပနားမား- ပနားမားစတော့အိတ်ချိန်း
ပနားမား၏အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း- ၏တရားဝင် site ကို
Camara က de Comercio အီး Industrias-Panama ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း။
စည်းဝေးကြီးများနှင့် itors ည့်သည်များဗျူရို- ပနားမား၏စည်းဝေးကြီးများနှင့် Vis ည့်သည်များဗျူရို။
Fundación Libertad ပနားမား- ဂန္ထဝင်စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအားပေးသည့်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Copa Air ကို
ပနားမားတူးမြောင်း- ပနားမားတူးမြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်။ပနားမား - ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်
Panameñoက de Turismo Instituto-Panama ခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့၏တရားဝင်ဆိုဒ်တွင်ပနားမား (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်း။ပနားမားသို့သွား
ပနားမား Tours-A Virtual Tourism Center ။
ပနားမားတူးမြောင်းပြတိုက် - ပနားမားတူးမြောင်း၏အမေရိကန်ခေတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း။အမြို့မြို့
ပနားမား (စီးတီး)- ပနားမား၏မြူနီစီပယ်။
အယ်လ်ပနားမားအမေရိက- နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံတကာသတင်းများ (စပိန်ဘာသာဖြင့်)
Panamáနှင့် Arte ယဉ်ကျေးမှု- ပနားမားအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ။
Biblioteca Nacional de Panamá- ပနားမားအမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ။
Museo de Arte Contemporáneo - ပနားမား-Modern Art Museum (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ။
Patronato Panamá Viejo- ပနားမားမြို့ဟောင်းပြတိုက် (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ။
Bocas del Toro ဇီဝဘူတာ- အပူပိုင်းဒေသဂေဟဗေဒနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
Fundación Albatros-Marine ဘဝစာရွက်စာတမ်းများ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ - ပနားမား
FAO - ပနားမား
ဘီဘီစီသတင်းနိုင်ငံ - ပနားမား
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - ပနားမား
ကမ္ဘာ့ Factbook –Panama
Human Rights Watch: ပနားမား
နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များ - ပနားမား
Atlas ဘဏ် https://www.atlasbank.com/
Banco က de Bogota https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
Banco မြစ်ဝကျွန်းပေါ် https://www.bandelta.com/
Mega အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် https://www.megabank.com.tw/personal
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ပနားမားရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ပနားမား အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်တွေ၊ ဖြန့်ဖြူးသူတွေ၊ လက်နက်တွေ၊ လက်နက်တွေ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေ၊
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း (သို့) ပနားမားကို ၀ င်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူမည်းများမှပနားမားဥပဒေအောက်မှာဖော်ပြထားသည်။
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပနားမားတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ပနားမားရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ပနားမားရှိသို့မဟုတ်ပနားမားမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ကုန်ကြမ်းများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များအားကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုပနားမားရှိကုန်သွယ်ရေး၊
●အငှားမိဘစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ပနားမားရှိသို့မဟုတ်ကနေသို့မဟုတ်သို့လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုများအပါအ ၀ င်ကလေးမွေးစားခြင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုပနားမားနိုင်ငံတွင်းမှသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်လာတယ်။
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်နေသောသို့မဟုတ်ပနားမားရှိတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ပနားမားအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ပနားမားရှိပုဂ္ဂိုလ်များဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ပနားမားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ပနားမား, ပနားမား ဘဏ်အကောင့်, ပနားမား ယုံကြည်မှု ပနားမား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ပနားမား။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ပနားမားအတွက်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-panama/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-panama/